Shirkadaha Golaha Elektiroonigga - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Shirkadaha Shirarka Elektarooniga ah - PCBFuture
Erayoxul: PCB shirkado, PCB soo saar, Shirka guddiga wareegga, Adeegga PCBA
PCBFuture waxaa la aasaasay sanadkii 2009. Waxay ku takhasustay wax soo saarka PCB, isku imaatinka PCB iyo qeybaha dhadhaminta. PCBFuture ayaa maray ISO9001: nidaamka tayada 2016, nidaamka tayada EU EU, nidaamka FCC.
Sanadihii la soo dhaafay, waxay uruurisay tiro badan oo wax soo saar PCB ah, Soo saar iyo khibrad khaldan, waxayna ku tiirsan tahay waaya-aragnimadan, waxay siisaa machadyo cilmi-baaris oo waaweyn iyo macaamiil ganacsi oo waaweyn iyo kuwa dhexdhexaad ah oo leh soo-saar hal-joogsi ah, alxamid, iyo ka-kabasho wax-ku-oolnimo sare iyo kalsooni sare leh lakabyo badan oo daabacan oo laga soo qaaday shaybaarro ilaa qaybo badan Adeeg noocan ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha kala duwan sida isgaarsiinta, aerospace iyo duulista, IT, daaweynta caafimaadka, deegaanka, awoodda korontada, iyo qalabka baaritaanka saxda ah.
Maxay yihiin Shirkadaha Golaha Elektarooniga ah?
Shirkadaha shirarka elektarooniga ah waxay ku hawlan yihiin ganacsiga wax soo saarka iyo tijaabinta shirarka guddiga wareegtada daabacan, kiniisadaha fiilooyinka, xarkaha fiilooyinka, fiilooyinka fiilooyinka iyo looxyada daabacan ee loo isticmaalo alaabada elektaroonigga ah ee warshadaha kala duwan. Sababo badan awgood, waa wax aad u faa'iido badan in loo oggolaado qaybta saddexaad inay soo saaraan qaybahaas.
Faa'iidooyinka shirkadda kulanka elektiroonigga ah?
Shirkadaha isku xidhka elektarooniga ah waxay siiyaan dabacsanaan shirkadaha yar yar ee leh wax soo saar xadidan waxayna yareeyaan arrimaha kheyraadka aadanaha. Waxaa intaa dheer, ujeedada naqshadeynta shirkadda shirarka elektaroonigga ah ayaa ah inay ku takhasusaan dhaqaalaha ballaaran ee baaxadda leh, oo ay ku jiraan wax soo saarka, soo iibsiga alaabta ceyriinka ah, iyo isu soo uruurinta kheyraadka oo ay ku jiraan khibradda qaabeynta warshadaha. Waxay sidoo kale bixiyaan adeegyo qiimo leh sida naqshadaynta injineernimada, falanqaynta waxsoosaarka, tijaabinta waxqabadka, dhibaatooyinka dhibaatooyinka iyo is-dhexgalka nidaamka hoose. Tani waxay sii deyneysaa macaamiisha aan u baahnayn inay soo saaraan oo ay hayaan tiro badan oo alaab ah. Natiija ahaan, macaamiisha ayaa ka jawaabi kara baalal lama filaan ah oo dalab ah si deg deg ah oo wax ku ool ah.
Maxaad u dooratay adeeggayaga shirarka elektiroonigga ah:
Dhamaan injineerada waxay leeyihiin wax kabadan 5 sano oo khibrad PCB ah.
Warshadda waxaa ku qalabaysan qalab kala duwan oo wax soo saar casri ah.
Shaqaaluhu waxay leeyihiin waxsoosaar badan, soo saarid iyo kormeer.
Waxaan haynaa waxa ay u baahan tahay si loo daboolo baahiyahaaga mashruuca laga soo bilaabo fikrad ilaa wax soo saar iyo sidoo kale inaan noqono lamaanahaaga injineernimada elektarooniga ah oo dhameystiran iyadoo aan loo eegin sida uu mashruucu u weyn yahay ama u yar yahay.
Waxaan ku takhasusay soo bandhigida alaabada cusub iyo kor u qaadista wax soo saarka mugga, taageerida wareegga naqshadeynta macaamiisha oo dhan iyo dhiirrigelinta iskaashiga muddada-dheer.
1. RoHS u hoggaansamida PCB-ga.
2. Waxsoosaarka PC PCB
3. microvias-ka Laser, vias vias, vias vias
4. Baarka baaritaanka korantada
5. Imtixaanka PCB Impedance
6. Waqtiyada leexashada dhaqso
7. Teknolojiyada dusha sare
8. Tikniyoolajiyadda 'Thru-Hole'
9. Been abuurka PCB iyo isku imaatinka
Adeegga PCBFuture wuxuu isku daraa xal buuxa oo ka yimaada naqshadeynta qaabeynta, barnaamijyada wax soo saarka iyo saadka. Adeegyadu waxay hubaal kaa caawin doonaan inaad kordhiso tartankaaga, adoo ku taageeraya macaamiisha waqtigeeda, xakameyn tayo leh oo adag, iyo qiimeyn wanaagsan, oo leh adeegyo wax soo saar u gaar ah & wax soo saar gaar ah u leh waddanka qiimaha ku tartamaya.